I-Tall Tale ye-Cigar Arsonist
Kuphi na I-Classic & Historic Legends
I-Cigar Arsonist-i-Legend League
by UDavid Emery
Inqolobane ye-Netlore: Indoda yaseNorth Carolina ikhupha i-inshorensi yomlilo kwi- sty pricey ye-cigars ezingabonakaliyo ; uyabatshiza kwaye afake iifayili, ngokubhekiselele kwimbali yasezidolophini ezijikelezayo ukususela ngo-1960. Ubani ocinga ukuba uphumelele enkundleni?
Uvavanyo lweNdaba yeCigar Arsonist Story
Eli bali liyimashumi emashumi ubudala kwaye mhlawumbi livela njengehlaya. Ingqungquthela enkulu ebhaliweyo yabonakala kwincwadana ye-toastmasters ye-1965 kwaye yayibonakalisa ukuphefumlelwa ngokuthe ngqo kwintlobo yokuqala ye-intanethi, eyathunyelwa kwingxoxo ye-Usenet ngoFebruwari 1996:
Umsiyi we-cigar wathenga amakhulu amabini ama-stogies abizayo waza wabafaka isiqinisekiso emlilweni. Emva kokuba wayebaculile bonke, wafaka ibango, ebonisa ukuba iicuba zatshatyalaliswa ngomlilo. Inkampani inqabile ukuhlawula, kwaye le ndoda yathetha. Ijaji elawula ukuba ngenxa yokuba inkampani yomshuwalense yayivumelene ukuqinisekisana nomlilo, yayinoxanduva lokusemthethweni. Inkampani ihlawule ibango kwaye kwaye xa loo ndoda yamkele imali leyo, inkampani yamenza ukuba ibanjwe ngenjongo yokutshiswa.
Nantsi inqaku elifanayo eliseNorth Carolina kule nguqulo ye-Usenet yoFebruwari 1997:
Into evezwe kwirediyo:
Indoda yaseNorth Carolina, ekuthengeni iicigre ezininzi ezibizayo, yaqinisekisa ukuba ... yifumane le ... umlilo. Emva kokuba wayebaculile, ngoko wagqiba ekubeni wayenabango kwiinkampani zomshuwalense waza wafaka. Inkampani yomshuwalense yenqabe ukuhlawula, icacisa isizathu esicacileyo sokuba le ndoda yayidla i-cigar ngokuqhelekileyo. Le ndoda yathetha. Ijaji yathi ekubeni i-nkampani iqinisekise i-cigars ngomlilo, yayimbopheleleko yokuhlawula. Emva kokuba le ndoda yamkele inkokhelo yebango layo, le nkampani ke yamenza wabanjwa ngenxa ....
Njengoko ibali lihamba nge-imeyile, likhule lide kwaye lichazwe ngokubanzi, kwaye ngo-1997 inguqulelo yosuku lokugqibela elineCharlotte, iNC yayisisigxina. UDavid Boraks, intatheli yeCharlotte Observer , wazama ngokungazenzisiyo ukuyiqinisekisa. Wabhala wathi: "Enye imvu, ndizamile ukuqinisekisile ibali le-cigar.
Kodwa ukukhangela kwirekhodi yeenkundla kunye neefayili zephephandaba akupheli ukuba kubekho ityala elinye okanye i-NC yeendaba ezichasene nale siganeko. "Akunjalo ukuba ubani omele amangaliswe.
INguqulelo Entsha yeBali leCigar Burning
Uhlobo olutsha oluthi isimangalo se-cigar aficionado sasigqwesa saqala ukujikeleza phakathi kwe-2002 Nantsi i-imeyili enegalelo ngokungaziwa ngo-1997:
FW: Isihloko: Inkqubo yethu esemthethweni yomthetho
Umntu waseCollotte, eNorth Carolina, uthenge ityala lezinto ezinqabileyo, ezibizayo kakhulu, waziqinisekisa ukuba (ukufumana oku) umlilo! Ngenyanga, ebhembile yonke i-cigars enobuncwane, kwaye engakenzi ukuhlawulwa kwe-premium kwipolisi, le ndoda yafaka ibango kwinkampani yomshuwalense.
Kwimangalo yakhe, le ndoda yathi yayilahlekelwe iicuba "kwinqanaba lemililo emincinci." Inkampani yenkampani yomshuwalense yenqabe ukuhlawula, icacisa isizathu esicacileyo sokuba le ndoda yayidle iiguba ngendlela eqhelekileyo. Le ndoda yamangalela - kwaye iphumelele! Ekuhambiseni isigwebo sakhe, umgwebi wathi ekubeni loo ndoda ibambe ipolisi evela kwinkampani apho yayikuqinisekisile ukuba iicigars zazingenakuqinisekiswa kwaye ziqinisekiswe ukuba iicigars ziya kubanjelwa emlilweni, ngaphandle kokucacisa oko bekucingwa njengomlilo ongavumelekanga, Kwakunyanzelekile ukuba ahlawule i-insured yokulahlekelwa kwakhe.
Esikhundleni sokunyamezela inkqubo yesikhalazo eside kunye neendleko, inkampani yomshuwalense yamkela ngesigwebo isigwebo sejaji kwaye yamhlawulela indoda eyi-15,000 yee-cigarethi ezingabonakaliyo ezilahlekileyo emlilweni. Emva kokuba le ndoda ikhuphe isheke, nangona kunjalo, inkampani yomshuwalense yamenza wabanjwa ngamanani angama-24. Ngobango lakhe lomshuwalense kunye nobungqina obuvela kwimeko yangaphambili esetyenziswe njengobubungqina ngaye, le ndoda yafunyanwa yicala lokutshisa ngamabomu iigayira ezingabonakaliyo kwaye yagwetywa iminyaka engama-24 ngokulandelanayo.
Ngoko musa ukukrazula inkampani yakho yomshuwalense!
Imithombo kunye nokufunda okuqhubekayo
Intambo ye-Intanethi isasazeka ngeCharlotte Cigar Myth
Charlotte Observer , Disemba 30, 1997
Guardian (UK), Oktobha 15, 2002
Inhlekelele yeBoston Molasses ka-1919
Kutheni Sifaka Iipopu NgeHalloween?
Ngaba i-Nostradamus yayilungela ukuhlaselwa kwe-9/11?
Ingqungquthela yaseDolophini okanye uxhumano? I-Lincoln ne-Kennedy Coincidences
UMONDEX: UMarko weSilwanyana?
Ngaba i-Candy Candy ixhamla inkolelo-mfundiso?
I-New & Updated Updates Legends
Ikhohlisi: Ndiyakwazi Ukufunda Ingqondo!
Ama-100 aBaziwayo abaBaziwayo beXesha lama-20
IsiNgesi-isiJalimane seKhompyutha kunye ne-Intanethi
UJanet Evanovich - Uninzi olukhutshwa ngokutsha
13 Iimithandazo zendabuko yeDin Din and Blessings Time
Yintoni Eyona Ndawo Yokuphazamisa Ngomsebenzi?
IYunivesithi yeeMvume zeMatriki
I-Biography: uHenry T. Sampson
Ziyidlaphi Iinguqu Zorwandle?
I-Lattice Energy Definition
I-Lenticular Galaxies yi-Quiet, iDusty Stellar Cities ye-Cosmos
Indlela yokuCinga ukuba iNani liNkulumbuso
Iilwimi Amazwi anamaqhinga: iDessert vs. Desert
I-Sikh Impikiswano: i-Panthik Iingxabano, iingxabano, iingxabano kunye nokungafani
Indlela yokufunda iLayiti kwiTayiti yePaint
Abakwa-Carroll College Admissions
Ukuphefumlelwa kunye Neengcebiso Ngomtshato
Turkmenistan | Iinkcukacha kunye neMbali
Iishedyuli zoLimo lwaseMelika
I-Ohio Wesleyan Yunivesithi ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Aluminium okanye iAluminium?
Ukufumana kunye nokuQinisekisa ukuPhuphuma kweMiphumo ye-evaporative
Iintlu zeNdlu kwiKapa yeSigubhi
2-Man No Scotch: Indlela yokudlala ifom yeGolfu
Isampula MBA Essay yeWharton